Maamulka Puntland oo shaaciyay inaysan ka qeybqaadan doonin Shirka London – idalenews.com
Maamulka Puntland oo shaaciyay inaysan ka qeybqaadan doonin Shirka London
Iyadoo Dowladda Somalia ay warbixin ku aadan ka qeybgalka Shirka London ka sugeysay Maamulka Puntland ayaa waxaa War-saxaafadeed ka soo baxay Maamulka Puntland oo sheegtay in maamulka uusan casuumaad rasmi ah ka helin dhinacyada shirka, sidaas darteedna aanay wafdi u diri doonin Shirka London.
War-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in Maamulka Puntland uusan qadarin buuxda ka helin Dowladda Somalia iyo Dowladda Britain oo iyagu shir gudoominaaya Shirka 7-May ka furmaya Magaaladda London ee Cariga Dalka Britain.
Puntland waxay sheegtay in dhambaal ku saabsan mowqifka ay ka taagan tahay ay u gudbinayso shirka London gaar ahaan Xafiiska Ra’isul wasaaraha Dalka Britain David Camiron oo isagu horumuud u ah dhicida Shirkaasi.
War-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland ayaa waxa uu u qornaa “Intaa waxaa dheer, Puntland waxay aad uga wal-walsan tahay horumarinta dastuurka federal-ka ee kumeel gaarka ah ee ay Nairobi ku oggolaadeen saxiixeyaashii dhabbihii nabadda (June 22-keedii, 2012), Qaramada Midoobayna ay saxiixday iyadoo damiin ah, isla markaana ay si aqlabiyad ah ku ansaxiyeen argooyinkii qaran ee ansixinta dastuurka.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka Puntland.
Dhanka kale, War-saxaafadeedka ka soo baxay Puntlan ayaa waxa uu ka hor imaanayaa Socdaal shaqo oo uu dhawaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia ku taggay Magaallada Garowe halkaasi oo uu Maamulka Puntland kula hadlay iyadoona uu ku wargaliyay inay soo ajiibaan Shirka bishan aan ku jirno ka furmayo Maggaaladda London ee Cariga dalka Britain Hayeeshee War-saxaafadeedka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Dowladd Somalia aysan weli ku wargalin Puntland Shirka London.
Si kastaba ha ahaatee, Go’aanka Maamulka Puntland ay ku qaadaceen Shirka London oo ay shir gudoomineyso Dowladda Britain iyo Somalia ayaa waxa uu noqonaaya mid Puntland ay ku dalbaneyso in laga raali galiyo isla markaana garab laga siiyo Shirkaasi wallow Dowladda Somalia ay iyaduna Shirka London ka damacsan tahay Siyaasad fog oo ay ku maareyneyso Siyaasadaha Maamuladda.
Guddiga Maamul u Samaynta Gobolada Gedo iyo Jubbooyinka oo Sheegay in Hawshoodu u Hakan Doonin Dawladda Federaalka Somaliya
Dowladda Britain oo beenisay inay dalka Kenya hoy uga dhigayaan Magangelyo-doonka